आईतबार पारित कमोडिटिज बजारसम्बन्धी बिधेयकमा के व्यवस्था छ ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उद्योग > आईतबार पारित कमोडिटिज बजारसम्बन्धी बिधेयकमा के व्यवस्था छ ?
आईतबार पारित कमोडिटिज बजारसम्बन्धी बिधेयकमा के व्यवस्था छ ?
काठमाडौ । व्यवस्थापिका संसद्ले वस्तु बजार नियमन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ । संसद्को आइतबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेपछि कमोडिटिज बजार नियमनको दायरामा आएको हो ।
विधेयक अनुसार कमोडिटिज एक्सचेन्ज दर्ता गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिनुपर्छ । यसको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड तोकिएको छ । नेपालमा १० वर्षभन्दा अगाडि देखि कमोडिटिज बजार संचालनमा हुँदै आएको थियो । धितोपत्र बोर्डले कमोडिटिज बजारको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
विधेयकले बजारको सुपरिवेक्षण तथा नियमनको अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ । विधेयकमा बजार सञ्चालकहरुले कारोबार अनुमति पाएको १८० दिनभित्र कारोबार सुरु गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकास नगरी कारोबार सञ्चालन गर्न नपाइने र पुराना संस्थाहरुले समेत बोर्डसँग स्वीकृति लिएर मात्र कारोबार थाल्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीको कम्तिमा चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यसलाई आवश्यकताअनुसार बढाउन सकिने बताइएको छ ।
त्यस्तै, कम्पनीको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा कम्तिमा दुई जना वाहिरबाट स्वतन्त्र सञ्चालक चयन गर्नु पर्ने वाध्यत्मक व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तो कम्पनीको सञ्चालक बन्द अर्थशास्त्र, बाणिज्य शास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि हासिल गरेको र ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिका लागि रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा नाम बोर्डमा सिफारिस गर्नुपर्ने र बोर्डले उपयुक्तता हेरेर नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्नातकोत्तर उतीर्ण भई सात बर्षको कार्य अनुभव समेत भएको हुनुपर्नेछ । कारोबारको राफसाफ तथा फर्स्र्योटको काम गर्न छुट्टै व्यवसायी नियुक्त गर्नुपर्ने, वेयर हाउस पनि तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा छ । कम्पनीको सेयर एक व्यक्ति तथा संस्थाले पाँच प्रतिशत लिन पाउनेछन् भने विदेशी रणनीतिक साझेदारले भने ५१ प्रतिशतसम्म सेयर पाउने व्यवस्था छ ।
कम्पनीले बजारबाट लगानीकर्तालाई हुन सक्ने सम्भावित प्रणालिगत जोखिमबाट सुरक्षित गर्न लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापनालाई विधेयकले अनिवार्य गरेको छ । कसैले गलत काम गरेमा पाँच बर्ष जेल र पाँच लाख जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
२०७४ साउन १६ गते १२:१३ मा प्रकाशित
दूधको लागत मूल्य बढाएर ५० रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी
नबिल बैंकको ३४% लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि जलविद्युतको ८ करोड बढीको आईपिओ आउँदै
बर्डफ्लुपछि कुखुरामा प्रतिबन्ध !
माइक्रोफाइनान्सले २० प्रतिशत नगद र ५० प्रतिशत हकप्रद दिने !